တရုတ် ကား ဝန်ဆောင်မှု ပလက်ဖောင်း Touhu Car သည် IPO အတွက် ဟောင်ကောင် သို့သွား ရန်ပြင်ဆင် နေသည် – Pandaily
Jan 24, 2022, 17:41ညနေ 2022/01/24 23:25:35 Pandaily
ကား ဝန်ဆောင်မှု ပလက်ဖောင်းToucher ကား သည် တနင်္လာနေ့က ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း (HKEx) တွင် အလားအလာ ရှိသည်Goldman Sachs ၊ CICC ၊ Bank of America နှင့် UBS တို့သည် ပူးတွဲ စပွန်ဆာ များဖြစ်သည်။ ဈေးကွက် သတင်းများအရ Touhu Car Cars သည် လာမည့် စာရင်းတွင် ဒေါ်လာသန်း ၇၀၀ မြှင့်တင် ရန်စီစဉ် နေသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Touhu Sheep ၏အ လား အလာ ရှိသော IPO နှင့် ပတ်သက်၍ ကောလာဟလ များစွာကို တွေ့မြင် ခဲ့ရသည်။ ၎င်းတို့အား လုံးကို ကုမ္ပဏီမှ တရားဝင် ငြင်းပယ် ခဲ့သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ရှန်ဟိုင်း တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Touhu Car Maintenance သည်ကား နောက်ဘက် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ကား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ကိုအာရုံစိုက် သည့် ပလက်ဖောင်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး အွန်လိုင်း ကြိုတင် မှာကြား ထား ခြင်းနှင့် အော့ ဖ် လိုင်း တပ်ဆင် ခြင်းအတွက် ကား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ခြင်း ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
Touhu Cars သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရောင်းချ သော ခရီးသည်တင် ကား မော်ဒယ် အများစုကို ဖုံးလွှမ်း ထားသည်။ အထူးသဖြင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ၂ ၃၉ ခုနှင့် မော်ဒယ် ၄ ၄၀၀၀ ကျော်ကို ဖုံးလွှမ်း ထားသည်။ တာယာ များနှင့် ကိုယ်ထည် အစိတ်အပိုင်းများ အစားထိုး ခြင်းမှ သည်ကား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် အလှအပ အထိ ကား လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း ပေးသည်။
အဆိုပါ အလားအလာ ကိုလည်း Touhu ကား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အမြတ်အစွန်း သေး ကြောင်းပြသ ထားတယ်။ အချက်အလက်များအရ ကုမ္ပဏီသည် ၂၀၁၉ နှင့် ၂၀၂၀ တွင် ယွမ် ၇. ၀၄ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၁. ၁၁ ဘီလီယံ) နှင့် ၈. ၇ ၅၃ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၁. ၃၈ ဘီလီယံ) အသီးသီး ရရှိခဲ့သည်။ အရှုံး မှာ ယွမ် ၃. ၄ ၂၈ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၅၄ ၁. ၃၃ သန်း) နှင့် ယွမ် ၃. ၉၂ ၈ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၆၂ ၀. ၂၉ သန်း) ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ၏ပထမ သုံးလပတ် အရ ကုမ္ပဏီ၏ ၀ င်ငွေ သည်ယွမ် ၈. ၄ ၄၁ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁. ၃၃ ဘီလီယံ) သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၄၂ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာခဲ့သည်။ အစု ရှယ်ယာရှင် များ သည်ယွမ် ၄. ၄ ၃၅ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၀. ၃၆ သန်း) အရှုံးပေါ် သင့်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် Toucher ၏အွန်လိုင်း မျက်နှာပြင် တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော သုံးစွဲသူ ၇၂. ၈ သန်း ရှိခဲ့သည်။ ယခင် ကာလ ၏ တစ်နှစ် အတွင်းတွင် သုံးစွဲသူ ၁၃. ၉ သန်း ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၃၅. ၆% တိုးတက်ခဲ့သည်။ China Insights Consulting ၏အဆိုအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် Touhu Car Caring Moon သည် သုံးစွဲသူ ၁၀ သန်း အထိရောက် ရှိခဲ့ပြီး တရုတ် ကား ၀ န်ဆောင်မှုပေး သူများ စုရုံး သည့် အကြီးဆုံး ပိုင်ရှင် အသိုင်းအဝိုင်း ဖြစ်လာသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Hesai နည်းပညာ CES 2022 မှာ အသစ်စက်စက် မော်တော်ကား တန်း Hybrid ကို Solid-State Lidar AT128 ပြသ
အလားအလာ ကဖော်ပြ သည်မှာ Touhu Car ၏ ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေ ခြင်းသည် ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် စွမ်းရည် များ အဆင့်မြှင့်တင် ခြင်းနှင့် ပလက်ဖောင်း စနစ် များနှင့် အချက်အလက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ခြင်းနည်းပညာ များအပါအ ၀ င် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဆက်လက် အသုံးပြု သွားမည်ဖြစ်သည်။ Franchisees နှင့် ဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုခိုင်မာ စေရန် ၎င်း၏ စတိုးဆိုင် ကွန်ယက် နှင့် franchisees အခြေစိုက်စခန်း တိုးချဲ့ ။ စွမ်းအင် ပိုင်ရှင် အသစ် များအတွက် မော်တော်ယာဉ် ၀ န်ဆောင်မှု များနှင့်ပတ်သက်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများနှင့် ထိုကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုများ နှင့်ဆက်စပ်သော ကိရိယာ များနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာ များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများကို ကုမ္ပဏီက ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ငွေကြေး အရ Touhu ကား သည် အရင်းအနှီး ဈေးကွက်တွင် ကောင်းမွန်သော ကုသမှု ရရှိခဲ့သည်။ TUTHU Car သည် စတင်တည်ထောင် ချိန်မှ စ၍ Tencent , Baidu , Goldman Sachs, Gaojing Capital, Sequoia China, Qiming Venture Partners, Pleasure Capital, Legendary Capital, CICC, Haitong Kaiyuan, Construction Bank International နှင့်အခြား အဖွဲ့အစည်းများမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများ ရရှိခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ရန်ပုံငွေ စုစုပေါင်း ယွမ် ၉. ၁ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁. ၄၄ ဘီလီယံ) ရရှိခဲ့သည်။